Aims and Duties » Computer University (Dawei)
Contact To CU (Dawei)
Address of CU (Dawei)
Home » Aims and Duties
နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြုသည်ဖြစ်၍ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များမွေးထုတ်ပေးရာတွင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ အသိပညာ နှင့်အတတ်ပညာ အရည်အသွေးတိုးတက်ရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆည်းပူးလေ့လာနိုင်သော တက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန် အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုရှိစေရေးနှင့် အရည်အချင်းမီသော ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ အတတ်ပညာရှင်များ မွေးထုတ်ရေးတွင် အရေအတွက် သာမက အရည်အချင်းပါ မြင့်မားတိုးတက်ရေး ဦးတည်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Computer University (Dawei) intends to stand asauniversity where students can havealife-long learning system and can haveachance to sharpen their knowledge and abilities. This can lead to upgrade human resource for the development of science and technology sector.
Computer University (Dawei) is trying to produce well-qualified computer technicians to support the development of region. It is also trying to upgrade not only the qualities but also the quantities.
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနယ်ပယ်တွင် နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နည်းပညာကွာဟမှုမရှိစေရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ အသုံးပြုမှုမြင့်မားလာရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကို ဒေသအလိုက် သင်ယူနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာစေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်။
နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို အစဉ်လေ့လာ၍ မိမိ၏ပညာသင်ကြားမှုစနစ် ခေတ်မီတိုးတက်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်။
ကွန်ပျူတာဘွဲ့ပညာရေးစနစ်များ ပီပြင်စွာအကောင်အထည်ပေါ်လာရေး၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း များခေတ်မီတိုးတက်ရေးအတွက် ကွန်ပျူတာပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေမှုများအား စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသုံးသပ် ညှိနှိုင်း၍ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ရိုးမာတိကာများ စီစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင် ရေးဆွဲခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်
Missions of Computer University (Dawei) are as follow:
to develop Information and Communication Technology for reducing the gaps between nations with the regard of the Millennium Vision of the United Nations and to perform getting chances of learning information and technology in their respective regions
to implement for developing education system regarding with the learning of changes of international universities
to implement computer graduate system, upgrade and change curriculums and courses according to the changes of technology
to raise the researches which can be used directly for the region
Copyright © 2016 University of Computer Studies (Dawei). All Rights Reserved.